Ny varotra mailaka dia evolisiona, fa tsy revolisiona, ary ny antony tsy maintsy handraisanao azy | Martech Zone
Manomboka amin'ny fananganana tranobe ka hatramin'ny rindrambaiko fananganana.
Tamin'ny taona 1950 ny Modely fampandrosoana ny riandrano dia nampidirina tao amin'ny famolavolana sy ny fampandrosoana lozisialy. Ny rafitra dia reliky ny indostrian'ny famokarana izay, raha ilaina, ny valiny marina dia tsy maintsy noforonina alohan'ny nanombohan'ny asa. Ary, amin'ity tontolo ity, misy dikany ny valiny mety! Azonao an-tsaina ve ny tranga iray izay nanapahan-kevitra hanangana trano-trano amin'ny fomba hafa amin'ny alàlan'ny fananganana?
Izany dia nilaza fa ny vokatra azo avy amin'ny fampiasana an'ity dingana ity amin'ny fampivoarana ny lozisialy dia ny famolavolana ny rindrambaiko (feature + ux) tokony ho marina upfront. Ny tsingerina fampandrosoana mahazatra dia natomboka tamin'ny Marketing nanao fikarohana momba ny tsena sy ny olana iray ary ny fanomezana ny heviny amin'ny endrika Document Requirements Document sy / na Product Requirements Document. Avy eo ny ekipan'ny fampandrosoana dia hikorontana ary hanangana izay nolazain'ny ekipa Marketing fa tadiavin'ny tsena ary rehefa vita izy ireo dia naverin'izy ireo tany amin'ny ekipa Marketing izay nanampy azy ireo ho an'ny mpanjifa. Nandaitra ity modely ity. Ary tena niasa tsara ho an'ireo orinasa toa an'i Microsoft izy io.
Misy zavatra tsy ampy amin'ity dingana ity. Ny mpanjifa.
Ireo Anarchista mpikarakara
Inona no atao hoe Agile?
Ny fomba fiasa manohitra lehilahy maditra.
Fananganana singa mavitrika amin'ny asa aman-draharaha hierarkisialy
Zavatra fitarihana telo tokony hotadidina
Ny haingam-pandeha dia momba ny fitarihana, fa tsy ny fitantanana bebe kokoa
Inona no manomboka amin'ny hoe mihodina ny maso dia afaka ny hisokatra amin'ny masonao – raha avelanao
Mandahatra ny boky
Tamin'ny faramparan'ny taona 90 dia nitombo haingana be ny Internet ka nanjary toerana mafana ara-barotra natsofoka tamina orinasan-tserasera vaovao miovaova ary, mety ho zava-dehibe kokoa, dia nanomboka nanome fomba azo ampiasaina hametrahana rindrambaiko. Tsy notakiana intsony ny mpamorona hanome ny vokatra farany azony amin'ny ekipa Marketing amin'ny tompona volamena azon'izy ireo ampitaina amin'ny Internet avy hatrany ny kaody farany ary mahitsy amin'ny mpanjifany.
Miaraka amin'ny fanaparitahana ny rindrambaiko miantefa amin'ny mpanjifa, ny mpamorona sy ny mpamorona dia nahazo fidirana eo noho eo amin'ny angon-drakitra marobe momba ny fomba fiasan'ny vokatr'izy ireo. Tsy fanehoan-kevitra manara-penitra avy amin'ny Marketing fa tena angon-drakitra ifanakalozan'ny mpanjifa. Iza amin'ireo endri-javatra no nampiasaina ary iza no tsy! Vaovao tsara daholo? No.
Ny maodelin'ny fampandrosoana ny riandrano sy ny fizotran'ny orinasany izay nanehoan'ny zato taona lasa ny lalana nahomby tsy niasa intsony. Tsy namela ny hevitry ny fotoana tena izy. Tsy nisy hevitra momba ny famerimberenana haingana.
Tamin'ny taona 2001 dia nivory tao amin'ny a ny vondrona mpamorona sy mpandinika ny fikambanana Fitsangantsanganana any an-tendrombohitra any Utah hiresahana ny fomba ahafahan'ny dingana vaovao ahafahan'ny fifandraisana tsara kokoa amin'ny mpanjifa ary miteraka ekipa matanjaka sy rindrambaiko tsaratsara kokoa. Amin'io fihaonana io dia Fandrosoana haingana teraka ny hetsika ary izy io dia heverina ho rafitra manandanja amin'ny fananganana rindrambaiko. Eritrereto tsara ny fotoana farany nihaonanao tamin'ny ekipa injeniera iray izay niresaka momba ny fihemoran'izy ireo sy ny fandehan-dry zareo ankehitriny… lalina tokoa ny fomba haingana sy feno nananganana an'ity rafitra ity
Raha ny rahalahintsika injeniera dia niatrika ny iray amin'ireo dingana manelingelina indrindra amin'ny vanim-potoana niova nandritra ny taonjato lasa izay, nijoro ny Marketing. Ny tombony azontsika tamin'ny fahaizan'ny vaoavao ny injeniera dia ny fahafahanay nilaza izany Ny vokatra dia alefa tsy tapaka. Ankoatr'izay dia niditra an-jambany tamin'ny fizotran'ny raharaham-barotra sy ny rafitra nampiasainay izahay nandritra ny 100+ taona lasa. Andiana fizotra izay toa mampitovy ny maodelin'ny Waterfall Development.
Ny marketing dia tonga tamin'ny marina valiny amin'ny endrika fampielezan-kevitra, tagline, logo ary avy eo lasa mandra-pahavitanay alohan'ny nivoahanay tamin'ny asanay mba hampiditra ny asanay ho ao amin'ilay fantsom-piadidiana. Ary maninona no hiova isika? Ity fizahan-toetra voazaha toetra ity dia niasa nandritra ny am-polony taona maro. Saingy tsy mandeha intsony izy io ary i Dorsey sy Zuckerberg isaorana.
Ny fanentanana ny tambajotran-tserasera dia nanamora ny fahazoan'ny mpanjifanay sy ny vinanay ny valin'ny fampielezan-kevitray, ny laharam-pahamehana ary ny logo rehetra. Zavatra tsara izany, sa tsy izany? Tokony hisy anefa izany, amin'ny marketing, dia voafehin'ny fahafahantsika mamaly isika noho ny tsy fisian'ny fizotry ny asa. Tsy mailaka isika.
Tamin'ny 2011, tao San Francisco, nivory ny vondrona mpivarotra mba hiady hevitra momba ny fanovana ara-tsosialy sy teknika izay mitaky ekipa mpivarotra hiasa amin'ny fomba hafa. Fankatoavana fa misy ifandraisany ny mampitovy ny injeniera sy ny marketing ary ny maodelin'ny fampandrosoana Agile dia tokony ho maodely amin'ny Marketing.
Amin'ity fivoriana ity dia nomena anarana Sprint Zero Ireto mpivarotra ireto dia nandrafitra ny Manifesto Marketing haingana ary tao anatin'izay 3 taona lasa izay dia hitantsika ny fiheverana ny Agile Marketing nanomboka nihazona.
Inona no atao hoe mailaka?
Ny mailamailaka dia fomba iray voarindra hamenoana ireo filàna azo ampiharina isan'andro amin'ny orinasa iray, nefa mbola mitahiry fotoana "tsy mandeha amin'ny laoniny" hijerena ireo fahafaha-manao vaovao sy fanandramana. Ny pendulo dia mihodina eo anelanelan'ny fanavaozana (miakatra amin'ny hevitra vaovao ary manandrana vahaolana vaovao) sy ny marketing (fantaro izay asa ilain'ny mpanjifa hataonao ho azy ireo) ary ny mailaka dia mamela anao hamaha ny laharam-pahamehan'ny roa tonta.
Aleo milaza ny marina. Na noho ny faneriterena tena izy na ara-kolontsaina, ny ankamaroan'ny orinasa dia mahatsapa fa tsy manam-potoana na vola hanaovana andrana – ary mety tsy hanana izany velively. Saingy tsy misy fanandramana, ny orinasa manana quo dia resy amin'ny orinasa manelingelina. Ny tsy fanandramana miorina amin'ny fahafaha-manao asa vaovao dia toy ny milaza fa be atao loatra ianao amin'ny fivelomana hianaranao, hitombo ary hanovana ny fiainanao manokana.
Ity olana mahazatra ity dia mametraka ny fanontaniana:
Ahoana no ahafahan'ny orinasanao mampiasa vola amin'ny fanamby stratejika haingana ankehitriny nefa mbola mahafeno tarehimarika ara-bola maharitra sy maharitra?
Mino aho fa ny valiny dia ny fampiasana fanao mailaka, izay misy dingana kely, refy ary fitrandrahana maro - tsy paikady lehibe iray, lafo vidy, voadidy vato. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny mailaka dia ny fomba manohitra ny Mad Men.
Agile dia manome fotoana hijerena ireo hevitra tsy fantatra ao anatin'ny dingana maharitra izay manome fanavaozana amin'ny ambaratonga fahombiazan'ny fahombiazana. Fomba iray hanandramana zava-baovao nefa mbola hametraka ny isa anao. Ny sakana lehibe iray amin'ny fanavaozana dia ny firafitry ny hierarchy an'ny orinasa nentim-paharazana manilika ny ankamaroan'ny mpiasa manavao indrindra amin'ny famaritana ny anjara asany, amin'ny politika, ary amin'ny fanilihana mihoa-pampana.
Kotter dia mitanisa ny singa valo ilaina takiana amin'ny orinasa nentim-paharazana manomboka mamorona kolontsaina mpikaroka avy ao anatiny. Ireo singa ireo ihany no takiana mba hampivelarana fanao mailaka, mino aho.
Manan-danja ny maika - Ny fotoana mety fandraharahana na fandrahonana dia tokony ho maika maika hanao asa haingana. Tsarovy ny elefanta. Mandeha fihetsem-po izy. Mitadiava fandrahonana mety hidirany.
Manangana fiaraha-mitantana - Ho an'ireo izay te-hiditra ao amin'ilay tambajotra mailaka vaovao, dia tsy maintsy avy amina departemanta isan-karazany izy ireo ary manana andraikitra sy fahefana lehibe ao anatin'ny ambaratongam-pahefana. Ary, angamba ny zava-dehibe indrindra, ny mpikambana ao amin'ny fiaraha-mitantana dia tokony ho mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny tambajotra mailaka. Izany dia faniriana hanao vondron'olona fa tsy voatery hamorona vondrona.
Manana fahitana amin'ny alàlan'ny fampivelarana ny fandraisana andraikitra, fanontaniana hahitana valiny, fitsapana hosedraina. - Na inona na inona fotoana mety ataon'ny orinasa, mamelà hevitra izay antenainao hitrandrahana. Na dia diso aza izy ireo dia tokony hanosika ny filana voajanahary hahafantatra. Ny fahitana dia tokony hahaliana ny olona liana sy hahafanta-javatra.
Ampitao ny vina amin'ny fividianana entana amin'ny ambiny amin'ny vondrona mailaka sy ny orinasa iray manontolo. - Lazao mazava tsara ny fisainanao. Tsy mila mahita izy ireo fa mila mahaliana. Omeo ny tsirairay ny hevitry ny antony nisafidiananao fandraisana andraikitra hizaha sy hisafidianana mpanoratra mahay afaka maneho izany amin'ny fiteny tsotra sy tsotra.
Manome hery hetsika malalaka. - Ny herin'ny ambaratongam-pahefana ihany koa ny fahalemeny lehibe indrindra. Ny fanapahan-kevitra rehetra dia averina any an-tampony. Ao amin'ny tambajotra mailaka, ny hevitra sy ny fahaiza-manao dia mety ho avy amin'ny olona rehetra. Na dia misy fiaraha-mitantana aza, ny zavatra dia ny manala ireo sakana, fa tsy mitazona rojom-baiko. Izany tosika izany dia ny ambaratongam-pahefana manandrana mamerina ny fifehezana.
Mankalazà fandresena kely, hita maso ary fohy. - Tsy haharitra ny tamba-jotra mailakao, raha tsy asehonao haingana ny lanjanao. Haingana ny hanelingelina ny ezaka ataonao ny tsy mino an-keriny, ka aza maika handeha be eo noho eo. Manaova zavatra kely. Misafidiana hetsika azo raisina. Ataovy tsara. Ampiharo ny fizotran'ny mailamailaka. Izany dia hanangana hery.
Aza avela. - Amin'ny fotoana ilanao fandresena dia aza manambara fandresena be loatra. Ny hakingan-tsaina dia momba ny fianarana avy amin'ny lesoka sy fanitsiana. Mandrosoa hatrany, satria rehefa esorinao hiala amin'ny gazy ny tongotrao dia amin'izay no hipoitra ny fanoherana ara-kolontsaina sy politika. Manokàna fotoana ho an'ireo fandraisana andraikitra amin'ny tamba-jotra. Mifikitra eo, na manao ahoana na manao ahoana ny fanao mahazatra, mipoitra ny asa be atao.
Ampidiro ao amin'ny kolontsain'ny orinasa iray manontolo ny fanovana sy ny lesona ianarana. - Izany no ahafahan'ny tambajotra mailaka mampahafantatra ny ambaratonga ambony. Rehefa mahita fomba tsara kokoa hanaovana zavatra na fotoana vaovao hanarahana azy ianao dia ampifanaraho amin'ny lafiny "hafa".
Tsy ireo dingana valo an'i Kotter ireo ihany no lakilen'ny fahombiazana, fa manome fitsipika mitari-dalana telo izy hitadidy ao an-tsaina.
Ireo dingana valo dia tsy mifanaraka. Ireo dingana ireo dia maodely fa tsy fizotra na fomba fiasa - endrika iray fa tsy fandrosoana milamina. Tokony hitranga daholo izy ireo, saingy tsy voatery hitranga amin'ny filaharana manokana. Aza very etona manahy be loatra ny filaminana.
Ny tambajotra mailaka dia tsy maintsy atao tafika an-tsitrapo. Manodidina ny 10% ny mpiasa no ampy, raha mbola te-ho eo ny olona ao anaty tambajotra. Aza mitokana na mihidy hiditra amin'ny fandraisana anjara, fa aza manandrana manangona olona izay manana eritreritra ara-drafitra 100%, satria tsy ho faly izy ireo eo ary tsy ho hitany ny lanjan'izany. Araka ny nolazain'i Kotter, “Ny tafika mpirotsaka an-tsitrapo dia tsy vondron'olom-bitsy mitondra baiko avy amin'ny varahina. Ny mpikambana ao aminy dia mpitarika miova izay mitondra angovo, fanoloran-tena ary hafanam-po."
Ity vondrona mailaka ity dia tsy maintsy miasa miaraka amin'ireo olona miasa ao anatin'ny ambaratonga ambony, saingy tsy maintsy mitazona tamba-jotra ho an'ny fahalalahana sy hakingana. Ny tambajotra dia toy ny rafi-masoandro miaraka amina fiaraha-mitarika mitarika eo afovoany sy ny fandraisana andraikitra sy ny sub-premières ireo izay miaraka ary rava arak'izay ilaina. Ny tambajotra dia tsy azo jerena ho toy ny "opération rogue" na ny hierarchy dia hanorotoro azy.
Agile dia lalao famerenana amin'ny laoniny ny toeram-piasana maoderina hahazoana fahitana, fotoana mety, valiny, famotopotorana, fahalianana, hetsika ara-tsindrimandry ary fankalazana. TSY fitantanana tetik'asa, famerenana ny tetibola, tatitra, rojom-baiko, fanonerana na fandraisana andraikitra amin'ny paikady Mad Men rehetra Rafitra roa ao amin'ny fikambanana ONE izay mifameno – tsy tokony hitovy – izy samy izy. Ny tsara indrindra, ireo mpiasa mivoatra amin'ny tamba-jotra mailaka dia afaka mitondra an'io angovo vaovao io any amin'ny ambaratongam-pahefana ihany koa.
Ilay tambajotra mailaka vaovao dia mety hahatsapa ho toy ny fanazaran-tena ho an'ny mpiasa iray lehibe, malefaka, malemy paika. Tsara izany! Mivoatra izy io. Tsy fiovana tampoka na manaitra izany. Toy ny fanazaran-tena amin'ny fananganana ekipa, mila fiononana sy fahatokisan-tena mivoatra rehefa mandeha ny fotoana.
Tohizo hatrany. Ataovy ho kely ny dingana. Ampitao hatramin'ny voalohany ny fandresena. Ento eo ambaninao ny tongotrao rehefa mivarotra ny tambajotra mailaka amin'ny ambaratongam-pahefana efa misy ianao. Raha manao izany rehetra izany ianao dia hipoitra ny sanda ara-barotra alohan'ny hamoahan'ny ambaratongam-pahefana azy ho hadalana, tsy mitovy, fandaniam-potoana, na izay mpanamory hafa mazàna mivoaka amin'ny 90% hanakanana ny 10%.
ankehitriny fotoana very mitarika amin'ny hevitra tsara rahampitso. Ny asa mailamailaka — toa ny famoronana ihany — dia tsy kilalao 95% na taham-pahombiazana tsara kokoa. Raha izany dia samy nanao an'io daholo ny olona.
Ary tsy hisy ny fotoana mety, raha samy manao izany ny tsirairay.
Mitombo haingana. Maninona ny marketing haingana sy ny fandraharahana dia tsy ilaina fotsiny fa takiana.
Tags: mailakamarketing marketingfomba fanao mailakatetikasam-barotramitombo hainganazava-baovaoJascha Kaykas-WolffkotterMad Men-barotrafitarihana marketingbarotra tetikamaodely fampandrosoana ny riandrano
Ahoana ny fandrefesana ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny haino aman-jery sosialy